Ungayibheka kanjani ithemba lokuthuthuka lemikhiqizo yepulasitiki
Kusukela ngoJanuwari kuya kuNovemba 2020, imboni yemikhiqizo yepulasitiki kazwelonke iphothule ukukhishwa kwamathani ayizigidi ezingama-71.614, ukwehla unyaka nonyaka ngama-5.3%. NgoNovemba, imboni yemikhiqizo kazwelonke yepulasitiki yaqedela ukukhishwa kwamathani ayizigidi eziyi-7.903, unyaka- ukwanda konyaka ngo-1.0%. I-plastiki imboni invo ...
Liyini ikusasa lomkhakha wepulasitiki
Amathuba okuthuthukiswa kwezimakethe: Njengamanje, ukuthunyelwa komkhiqizo wepulasitiki wezwe lami kusabhekene nezinselelo ezinzima njengokwakhiwa komkhiqizo wepulasitiki ongaphelele kanye nezinga eliphansi lobuchwepheshe jikelele. Kodwa-ke, njengoba uguquko lwesakhiwo sokuhlinzekwa kwasekhaya luqhubeka, umkhiqizo wepulasitiki wasekhaya ungena ...
Izinguquko ezimakethe embonini yamaplastiki
Ngokushintshwa kwesidingo semakethe nokwenza ngcono uchungechunge lwezimboni, amakhasimende asezansi nomfula ezinkampanini zesikhunta agudluke kancane kancane kusuka emfunekweni eyodwa yekhwalithi yesikhunta kuya kusixazululo esihlanganisiwe "somkhiqizo wesikhunta". Ngokususelwa eminyakeni yokuqongelelwa kobuchwepheshe ku-mold desig ...